I-Shuo Ke Wire Mesh product Technology Co., Ltd. itholakala e-Anping County, China. Yasungulwa ngo-2009, inkampani isineminyaka engaphezu kuka-10. Inkampani yethu ikhethekile eyenziwe ngokukhiqiza, ukucubungula nokudayiswa kwe-mesh yokuhlobisa, uthango lokuphepha, uthango lwegceke lomphakathi, isitimela somgwaqo, uthango lwezindawo ezinotshani, njll.
Imikhiqizo ye-Shuo Ke wire mesh Technology Co., Ltd. yenza ikhethini lensimbi lomuntu siqu, inezikhala zokuhlobisa odongeni, i-partition mesh yokuhlobisa, i-elevator mesh yokuhlobisa insimbi, i-ceiling mesh yokuhlobisa, ingilazi enezikhala zensimbi, izinto eziwayo ezinezikhala zokuvikela zensimbi engagqwali neminye imikhiqizo yensimbi yokuhlobisa. ngesitayela sobuciko, lena i-mesh yokuhlobisa ephezulu edumile eminyakeni yamuva.
Ithimba Lezobuchwepheshe Eliqinile
Sineqembu eliqinile lezobuchwepheshe embonini, amashumi eminyaka esipiliyoni sobuchwepheshe, izinga lokuklama elihle kakhulu, sakha i-intelligentequipment esezingeni eliphezulu esebenza kahle kakhulu.
Inkampani isebenzisa izinhlelo zokuklama ezithuthukile kanye nokusetshenziswa kwe-ISO9001 2000 yokuphathwa kwesistimu yokuphathwa kwekhwalithi yamazwe ngamazwe.
Le nkampani igxile ekukhiqizeni izinto zokusebenza ezisebenza kahle kakhulu, amandla ezobuchwepheshe aqinile, amakhono aqinile okuthuthukiswa, izinsizakalo ezinhle zobuchwepheshe.
Izinto zokuhlobisa ezinezikhala ziyinsimbi engagqwali, ingxubevange ye-aluminium, ithusi nezinye izinto.Umbala wekhethini lemeshi yensimbi uyashintsheka. Ngaphansi kwe-refraction yokukhanya, indawo yokucabanga ayinamkhawulo.Ivame ukusetshenziswa ku-facade, ukwahlukanisa kwangaphakathi, uphahla, udonga, kuvulandi kanye nomhubhe wezakhiwo. Manje isetshenziswa esikhumulweni sezindiza, ehhotela, ehholo lombukiso, i-opera house, isakhiwo samahhovisi, inxanxathela yezitolo, ibha kanye nokunye ukuhlobisa kwangaphakathi nangaphandle.
I-ShuoKe iphinde ikhiqize i-mesh ehlukahlukene yokuvikela ukuphepha, uthango lwegceke, uthango lokuvikela isimo somoya, imigwaqo yokuqapha imigwaqo, njll. ukuze unikeze imikhiqizo emisha yokuvikela isakhiwo impilo yonke, njengokuvikela ekuntshontshweni nasezintweni eziwayo. Izithango ezikhiqizwe i-ShuoKe zinezinzuzo zokuphepha, ubuhle nokusebenziseka, futhi zamahhala zenzelwe amakhasimende.
Ukuphishekela kwethu izinto ezintsha kanye nekhwalithi ephezulu, kunomklamo oqinile, ukuthuthukiswa, namandla okukhiqiza, ngakho-ke i-wire mesh yethu ithandwa kakhulu ngamakhasimende. Njengamanje, imikhiqizo yethu ithunyelwe e-United States, Canada, Europe, Australia. , Spain, South Korea, Japan kanye namazwe angaphezu kuka-20.
Uma udinga ukwenza ngezifiso imikhiqizo yephrojekthi yakho, sicela usithinte.